DA-BC13001 igba ígwè cookware 2020 na-ekpo ọkụ ire ere elu mma
DA-BC37001 2020 ire ọkụ esi nri esi China eme
Enwere ọtụtụ elele nke isi nri na iron cookware. Otu n'ime ndị isi uru ịdị na-esi nri na obere mmanụ ozugbo ị nweta ezigbo sizinin na gị cookware. Nke a na-enye ohere maka obere mmanụ na-ete mmanụ na obere mmanụ iji nweta eriri ajị na-acha aja aja. Ọzọ uru bụ na mgbe eji igba ígwè cookware ígwè ga ndammana wusie ike gị nri na ígwè. Na mgbakwunye nke a bụ nnwere onwe kemịkalụ na ndị ọzọ na-abụghị osisi pans dị ka Teflon ma ọ bụ Efere
DA-BC26001 / 32001/32002/ 37001/ 37002 igba ígwè kpụ ọkụ n’ọnụ 2020 na-ere ọkụ na-eme na china